Shafar | Zanzu
U noqonaya qiimo naftaada iyo deegaanka. Dadka qaar waxay u qeexaan sharafta nafahooda. Kuwa kale sharaqfta waxaa u qeexa qoyskooda. Tusaale ahaan, xidhiidhka aanu qoysku aqbalin waxay saamayn kartaa sharafta qoyska.
Standard term: Eer
Neutral term: Eerbaarheid, deugdzaamheid, eerzaamheid
Dagaalka sharafta ku salaysan
Waa maxay dagaalka galmaddu?